LYNN, Yangon, Lampang (2021)
หน้าหลัก > ประเทศไทย > Lampang > โรงยิมและอุปกรณ์กีฬา > LYNN
ร้านกินรี 431/97 ชุมชนเทศบาล4 ถนน รอบเวียง ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100
QASkin'Thailand เรื่องสิว เรื่องฝ้า ปัญหาผิวหน้าต้องคิวเอสกิน
1105 หมู่ ต.พระบาท อ.เมือง
112/166 Phrabat Road. Phrabat Sub-district. Meuang District.
357/22-23 ถ.ดวงรัตน์ ต.สวนดอก อ.เมือง
127 ถนน วังขวา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง
63 - 65 ถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง 113 ต.สวนดอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ลำปาง, Nakhon Lampang
Lampang city, Amphoe Hang Chat
สุขสวัสดิ์ 1, Amphoe Muang Lampang
ถ.รอบเวียง ซ.3 ต.สวนดอก
129 ถนนรอบเวียง ตำบลหัวเวียง เมือง
ถนน พหลโยธิน, Nakhon Lampang
The Star Karaoke' - เดอะสตาร์ คาราโอเกะ
เลขที่14 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง
NANAH Theatre Studio, Lampang
215 ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก
ข้างโรงเรียนบุญวาทย์ฯ ทางเข้ามีหมูจุ่มอินดี้และร้านแอดโฮมชาบู ปิ้งย่าง
Thip chang road.ถนน ทิพย์ช้าง, Nakhon Lampang
We offer affordable PRICE for reasonable QUALITY. Our GOAL is your satisfied smile. Thanks for shopping us.
Aye Nyein 90's Snack
90's Born တွေရဲ့အသဲကျော်တွေပါ...တစ်ပုံချင်းစီအောက်မှာ ဈေးနှုန်းတွေပါပါတယ်နော် 😊....လာဝယ်လို့လဲ ရပါတယ်နော်
59 ပထပ် အေ
ပုစွန်မုန့် - 1000 kyats (အထုပ်သေး ၁၀ ထုပ်ပါ)
ခေါင်းဦးမုန့် - 2000 Kyats ( ၁၀ ထုပ်)
- 3000 Kyats (အထုပ် ၂၀)
ငုံးဥသကြားလုံး - 2500 Kyats ( အလုံး ၅၀)
အာလူးကြော် - 700 Kyats ( ၁ ထုပ်)
မြေပဲဆားလှော် - 1500 Kyats ( ၁ ထုပ်)
CB or 09263906846 ကို ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်...
ပစ္စည်းအားလုံး Instock လုံလုံလောက်လောက်ရှိတဲ့အတွက် ရန်ကုန်မြို့ထဲ ၂ ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါတယ်...
နယ်ကမှာယူလိုသူများ ဘဏ်ငွေလွှဲပြီးတာနဲ့ ၁ ရက်အတွင်း ကားဂိတ်ပို့ပေးပါတယ်...
59 ပထပ် A
(စိုပြေ စားသောက်ဆိုင်အပေါ်ထပ်) မှာလာဝယ်လို့ရပါတယ်...
1) ငုံးဥသကြားလုံး 1 ထုပ်(50 Pcs)
2) ခေါင်းအုံးမုန့် 10 ထုပ်
3) ဇီးပေါင်း 1 ထုပ်(10 Pcs) ပါရှင့်
🍭🍭🍭ကံစမ်းမဲစည်းကမ်းချက်တွေကို သေချာလေးဖတ်ပေးပြီး Food Lover လေးတွေ ကံစမ်းကြပါဦးနော် 🍬🍬🍬
1. Page ကို like ပေးပါနော်
2. ဒီ Postလေးကို Public Modeနဲ့ Shareပေးပါရှင့်
3. ပြီးရင် Shareထားတဲ့ Postလေးကို Screenshot လေးရိုက်ပြီးဒီ Post ရဲ့ အောက်မှာ Comment ရေးပြီး ကံစမ်းချင်တယ့် မုန့်အမျိုးအစားကို ရေးပေးဦးနော်
4. ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ရန်ကုန်ကဖြစ်လို့ လာယူနိုင်တဲ့သူ သို့ Deliခ ကျခံပေးမယ့်သူသာ ကံစမ်းပေးပါလို့
27.7.2017 မှာစည်းကမ်းချက်နဲ့အညီ Shareထားသူများထဲမှ မဲဖောက်ပြီး ကံထူးရှင်ကို ရွေးချယ်ပေးမှာပါနော်...
Food lover လေးတွေ ဝင်ရောက်ကံစမ်းကြဦးနော်...
နောက်ကားကြည့် Safety မှန် (တစ်စုံ)
Price- 8,000 Kyats (၈၀၀၀ ကျပ်)
ကားအနောက်ခန်း ထိုင်သူတွေ ကားပေါ်က ဆင်းတော့မယ်ဆိုရင် နောက်ကား လာ၊ မလာ၊ ရှင်း၊ မရှင်းကို နောက်ထိုင်ခုံ ကားထဲကနေ ခေါင်းထုတ်စရာ မလိုဘဲ ကြည့်နိုင်မယ့် နောက်ကြည့်မှန် ဖြစ်ပါတယ်၊
နောက်ကားမရှင်းဘဲ တံခါးဖွင့်မိမယ်ဆိုရင် accident ဖြစ်နိုင်ချေ အန္တရာယ်များ လွန်းလှပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကားအနောက်ခန်းထဲကနေ ထိုင်နေရင်း နောက်ကားလာ မလာ၊ ရှင်း မရှင်း သေချာသိနိုင်မယ့် နောက်ကြည့်မှန်ဖြစ်ပါတယ်၊
ကားရဲ့အလယ် ရှေ့တံခါးနဲ့ နောက်တံခါး ကြားထဲက ဘောင်မှာ တပ်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊
အကောင်းစားကပ်ခွာ အသုံးပြုထားလို့ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသလို ပြန်လည်ခွာယူချင်တယ်ဆိုလည်း ကားဘော်ဒီ၊ ကားဆေး စတာတွေကို ထိခိုက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊
ဒေါင်လိုက်အရှည် ၇ လက်မ၊ ဗျက်အကျယ် ၂ လက်မသာရှိလို့ အရွယ်အစားလည်း သေးငယ် ပေါ့ပါးပါတယ်၊
In stock ရှိပြီး ပစ္စည်းများသာ ရောင်းချပေးလို့ မှာယူပြီး နောက်အကျဆုံး ၂ ရက်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့်အတွင်း အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
မနက် ၁၀ နာရီမှ ည ၉ နာရီထိ
Order ပြုလုပ်လိုလျှင် Name, Item Name, contact number, fully address တို့ကို messages box or 092 6390 6846 ထဲကိုပို့ပေးလိုက်ရုံပါပဲ
တဆင့်ပြန်လည် ရောင်းချလိုသူများအတွက် လက်ကားဈေးသီးသန့်ရှိပါတယ်..massage box သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
ရန်ကုန်မြို့တွင်းအတွက် Home Delivery service ဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ။
နယ်ကမှာယူလိုသူများအတွက် အမြန်ချောစနစ် (သို့) အဝေးပြေးကားဂိတ်များကတဆင့် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
နယ်သမားများအတွက် အဝေးပြေးကားဂိတ်အထိ free ပို့ပေးပါတယ်။
ပစ္စည်းတန်ဖိုးငွေအား လက်ခံရရှိမှသာ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ပစ္စည်းအလိုက်တန်ဆာခကို ဝယ်ယူသူဘက်မှ ပေးချေရပါမည်။
အသေးစိတ်ကို အောက်က ဓါတ်ပုံများမှာ ကြည့်ရှူ လေ့ာလာနိုင်ပါတယ်၊ မရှင်းလင်းတာများကိုလည်း comment မှ ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းနံပါတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်စေ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
အချိန်ပေး ဖတ်ရှု့လေ့လာပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပါ။
Price-50,000 Kyats ( ငါးသောင်း ကျပ်)
တခါကစားရင် ၁၀ မိနစ်ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းသဘောမျိုး ကစားပေးရုံနဲ့ အဆီပိုတွေကျစေမဲ့အပြင် ကိုယ်လက်ညောင်းညာတာတွေ ပြေပျောက်စေမယ့် အားကစားစက်ကလေး မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားနည်းပါးသူတွေ၊ အထိုင်များသူတွေ၊ နာတာရှည်သဘောမျိုး ခါးနာသူတွေအတွက် အထူးသင့်လျော်မယ့် စက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်း အားကစားစက်တွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်တွေ အရင်ပြောပြပါ့မယ်။
★ ပြင်းထန်ခက်ခဲ၊ ပင်ပန်းစွာကစားစရာ မလိုပဲ သက်သာ၊ အေးဆေး၊ လွယ်ကူစွာ ကစားနိုင်မှာပါ။
★ ရိုးရိုး အားကစားစက်တွေလို ကိုယ်ခန္ဓာကျစ်လျစ်စေရုံသာမက အညောင်းဖြေစက်သဘောမျိုးပါ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခါးညောင်းညာခြင်းကို အညောင်းဖြေသက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
★ ကောင်းမွန်ထိရောက်တဲ့ စက်ရဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် ပေါ့ပါးပြီး နေရာယူမှု နည်းတဲ့အပြင် အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူ၊ ရိုးရှင်းပါတယ်။
သမရိုးကျ အိပ်ထမတင် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဟာ ခါးအားကို အဓိကထား အသုံးပြုတာကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ ခါးကို ဒဏ်ဖြစ်စေကာ ခါးနာဝေဒနာရစေပါတယ်၊ အခု စက်ရဲ့ ဒီဇိုင်းကတော့ ခါးအောက်ရင်းကနေ ပြန်တွန်းတင်ပေးတဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်လို့် ခါးနာဝေဒနာ မဖြစ်စေသလို ခါးကိုလည်း နှိပ်နယ်သလို အညောင်းပြေစေနိုင်မှာပါ။
စက်ရဲ့ အများဆုံး ခံနိုင်ရည်ဝိတ်ကတော့ ပေါင် ၂၅၀ (ကီလို ၁၁၃) ဖြစ်လို့ အတော်တန် ဝ သူတွေ သက်တောင့်သက်သာ ဝိတ်ချ၊ အဆီချ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုက်ပတ်လည်၊ ကျော၊ ပေါင်၊ လက်မောင်းစတဲ့နေရာများကို အပေါ်မှာတင်ပေးထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ထဲကလို အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Instruction စာအုပ်ထဲမှာလည်း ကစားပုံ၊ ကစားနည်းတွေကို သရုပ်ဖော်ပုံတွေနဲ့ ဖော်ပြထားလို့ ခက်ခဲမှုမရှိဘဲ ကိုယ်တိုင်ကစားနိုင်မှာပါ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းအတွက် Home Delivery service ဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း မြို့နယ်ပေါ်မူတည်၍ ပို့ခပေးရပါတယ်။
နယ်သမားများအတွက် ငွေချလံပို့ပေးပြီး ၁ရက်အတွင်း ကားဂိတ်ကိုပို့ပေးပါတယ်။
Photos from LYNN's post
09792019390 ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ဦးကိုကိုနိုင်ဆိုသူမှာ
၁.၉.၂၀၁၆ မှာအော်ဒါတစ်ခုတင်ပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ခိုင်းပါတယ်...
အိမ်လိပ်စာအတိအကျမပေးပေမယ့် ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ ၂.၉.၂၀၁၆ တွင် MGL Service ကိုသုံးပြီးပစ္စည်းပို့ပေးလိုက်ပါတယ်...
MGL မှာပစ္စည်းသွားဝေဖို့ ဖုန်းဆက်တဲ့အခါရုံးမှာကောင်လေးတယောက်ကို လာယူခိုင်းမယ်ဆိုပြီးပြောတာ ဒီကနေ့အထိလာရောက်ယူခြင်းမရှိပါ...
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ရာတွင်လဲ တခြားသူတယောက်ဟန်ဖြင့် ခရီးသွားနေတယ် ဆက်သွယ်ခိုင်းလိုက်မယ်...သူ့ကိုဆက်သွယ်လို့မရသေးလို့ဆိုပြီးပြောတာ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းပါ...
ငွေ၃သောင်းနဲ့ မိမိရဲ့သိက္ခာ၊ယုံကြည်မှုတို့ကိုတန်ဖိုးဖြတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်လို့ မြင်မိပါတယ်...
ကျွန်တော်တို့ respect ထားပြီးတစ်လကျော်အထိ ဆက်သွယ်မလားဆိုပြီးစောင့်နေခဲ့ပါတယ်...
တစ်ဘက်တည်းကြည့်တတ်လူကို ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီး မဆက်ဆံချင်သောကြောင့် Blacklist သွင်းပါတယ်...
ထိုသူလိုလူများရှိနေသောကြောင့် နောက်နောင် အိမ်တိုင်ရာရောက်မှာယူသူများကို အိမ်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ် အတိအကျရမှာသာ အိမ်အရောက်ငွေရှင်းစနစ်ဖြစ်ပို့စောင်ပေးပါမယ်...အွန်လိုင်းအလုပ်ဆိုတာ ယုံကြည်မှုနဲ့ လုပ်ဆောင်ရတာပါ...လူတိုင်းကိုယုံကြည်လို့မရကြောင်း သင်ခန်းစာရလိုက်ပါတယ်...
ကျပ် ၁သောင်းဖိုးတန်တဲ့ Mask Paper အရွက် ၃၀ နဲ့ Whitening Powder 500g တို့လက်ဆောင်ပါဝင်ပါတယ်...
အသီးအနှံများဖြင့် မိမိအသားအရည်နဲ့သင့်တော်သော မျက်နှာပေါင်းတင်ကပ်ခွာလေးကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြုလုပ်နိုင်သောစက်ပါ...
တယောက်နဲ့တယောက်အသားအရည်မတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့် မိမိအသားအရည်နဲ့ အသင့်တော်ဆုံး mask ကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ...
Instock ရှိသော ပစ္စည်းများကိုသာ ရောင်းချပေးပါသည်...
Order ပြုလုပ်လိုလျှင် Name, Item Name, contact number, fully address တို့ကို messages box or 092-6390-6845 ထဲကိုပို့ပေးလိုက်ရုံပါပဲ
ရန်ကုန်မြို့တွင်းအတွက် Home Delivery service ဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ။#ရန်ကုန်မြို့တွင်း မြို့နယ်ပေါ်မူတည်၍ #ပို့ခပေးရပါတယ်။
နယ်သမားများအတွက် အဝေးပြေးကားဂိတ်အထိ free ပို့ပေးပါတယ်။အဝေးပြေးကားဂိတ်များရှိသည့် တခြားနယ်မြို့များအတွက်လဲ ကားဂိတ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ။
အချိန်ပေး ဖတ်ရှု့လေ့လာပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပါ
[07/11/16] Respect မရှိသော customer များကို ထပ်မံသတိပေးခြင်း
Customer များခင်ဗျ ကျွန်တော်တို့ဘက်က delivery ခကိုအသက်သာဆုံးနဲ့ အချိန်မှန်ပစ္စည်းရောက်အောင် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်...တချို့သော customer များက သွားပို့တဲ့အချိန်မရှိတာ ဖုန်းဆက်ရင်ဖုန်းမကိုင်တာ တို့ကိုများစွာတွေ့ရှိရပါတယ်...ကျွန်တော်တို့မှာ တနေ့ကို မှာတဲ့သူတိုင်းကို လစ်ဟာမှုမရှိအောင် အချိန်မှီပို့်ပေးရပါတယ်...ရန်ကုန်မြို့ကားဘယ်လောက်တောင်ကျပ်လဲဆိုတာ customer များအသိဆုံးပါ...ကျွန်တော်တို့မှာ အဆင်ပြေဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးလမ်းကြောင်းကို ရွေးပြီးသွားရပါတယ်...တခါတခါလူမရှိတာတို့ ဖုန်းမကိုင်တာတို့က နောက်ထပ်အချိန်မှီပို့်ပေးရမယ့် customerများအတွက် များစွာအနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်...customer များရှိတဲ့အချိန်ကိုသေချာပြောပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်...တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသွားပို့ပြီး customer. အိမ်မှာမရှိလျှင် နောက်တခါထပ်ပို့ရမယ်ဆိုလျှင် delivery ခ ၂ဆကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်...၀ယ်ယူအားပေးမှုကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
#LYNN onlineshop နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်၍ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မှုများကို customerဆီကတဆင့်ပြန်သိရပါတယ်...LYNNမိသားစုမှလဲ ပြန်ပြောပေးကြတဲ့ customerများကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်...
#LYNN online shopမှ customerများကို 09263906845 ဖုန်းတလုံးတည်းဖြင့်သာ အော်ဒါအတွက်လက်ခံခြင်း customerများကိုဖုန်းပြန်ခေါ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်...
တခြားဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ရောင်းချသောပစ္စည်းများဈေးများခြင်း ကွာလတီမမှီခြင်း ၀န်ဆောင်မှုအဆင်မပြေခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးကြော်ငြာအပ်ပါတယ်...
ဝယ်ယူအားပေးတဲ့ မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များကို LYNNမိသားစုမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့်
[01/03/16] Customer များရှင့် ကျမတို့ဘက်က delivery ခကိုအသက်သာဆုံးနဲ့ အချိန်မှန်ပစ္စည်းရောက်အောင် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်...တချို့သော customer များက သွားပို့တဲ့အချိန်မရှိတာ ဖုန်းဆက်ရင်ဖုန်းမကိုင်တာ တို့ကိုများစွာတွေ့ရှိရပါတယ်...ကျမတို့မှာ တနေ့ကို မှာတဲ့သူပေါင်းများစွာကို အချိန်မှီပို့်ပေးရပါတယ်...ရန်ကုန်မြို့ကားဘယ်လောက်တောင်ကျပ်လဲဆိုတာ customer များအသိဆုံးပါ...ကျမတို့မှာ အဆင်ပြေဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးလမ်းကြောင်းကို ရွေးပြီးသွားရပါတယ်...တခါတခါလူမရှိတာတို့ ဖုန်းမကိုင်တာတို့က နောက်ထပ်အချိန်မှီပို့်ပေးရမယ့် customerများအတွက် များစွာအနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်...customer များရှိတဲ့အချိန်ကိုသေချာပြောပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်...တကယ်လို့ ကျမတို့ဘက်ကသွားပို့ပြီး customer. အိမ်မှာမရှိလျှင် နောက်တခါထပ်ပို့ရမယ်ဆိုလျှင် delivery ခ ၂ဆကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်...၀ယ်ယူအားပေးမှုကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
LYNN's cover photo
Driving Range's Café & Restaurant
100/4 หมู่6ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง
We serve Thai food and drinks !!!
ฝึกซ้อมมวย เพื่อสุขภาพ ลดน้ำหนัก กระชับรูปร่าง สร้างกล้ามเนื้อ ศิลปะป้องกันตัว
13/221 ต ต้นธงชัย อ เมือง จ ลำปาง
555 หมู่7ต.พิชัย อ.เมือง
โครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน
PTA Tennis ACADEMY,Lampang,Thailand
เปิดสอนเทนนิสทุกระดับ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-20.00 น
FC น้องเฟลม 304/60
;)) ช่วยไลท์หน่อยเน้อ 1ไลท์ต่อ 1กำลังใจ
Thai bar straps